प्रचण्ड, झलनाथ र वामदेवले प्रधानमन्त्रीसँग... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार १६
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक। तस्बिर: राजन काफ्ले/ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बालुवाटारमा जारी स्थायी समिति बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले धारणा राखेका छन्।
बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार तीनै जनाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतले प्रयास गरिरहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे गम्भीर विषयमा छलफल हुनु पर्ने बताएका छन्।
'जुन अभिव्यक्ति छ त्यो निराश छ। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने दिनमै पार्टीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो,' नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले सेतोपाटीसँग भने,'प्रधानमन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमै नक्सा जारी गरेर के हुन्छ? जमिन फिर्ता ल्याउने हो लगायतका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। नक्सामात्रै जारी गरेर हुँदैन भनेर उहाँले नै पटक-पटक भनेको हो।'
'पार्टीले राजीनामा माग्ने विषय पार्टीको आन्तरिक मामिला हो। यसमा कुनै पनि बाह्य शक्तिको चासो छैन,' उनले भने,'आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएर कार्यकर्ताको सहानुभूति बटुल्न उहाँले यस्तो गर्नुभएको हो। उहाँको यो कार्ड काम लाग्दैन।'
'प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो यो उहाँको तहबाट बोल्ने कुरा होइन। उहाँ होसपूर्ण ढंगले बोलेजस्तो लाग्दैन,' उनले भने,'आन्तरिक रूपमा मिलाउन पर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले भाषणबाट पोख्नुभएको छ। यो उहाँको पार्टीभित्रको कमजोर पोजिसन भएको संकेत हो।'
'प्रधानमन्त्रीको अरू काम त सन्तोषजनक छैन। त्यो कुराबाट बच्नका लागि राष्ट्रियताको कुरा अगाडि सार्नुभएको होला,' उनले भने,'उहाँसँग भाषण गर्ने समय छ तर पार्टी बैठकमा जान समय छैन। किनकी उहाँलाई बैठकसँग डर छ।'
'पार्टीको बैठक भइरहेको छ। त्यही बैठकमा सरकारको कामको मूल्यांकन हुन्छ। तर पार्टीले उहाँको राजीनामाबारे सोचेकै छैन,' उनले भने,'पार्टीभित्र त्यस्तो केही छैन।पार्टीमा त्योबारे कुनै कुरै उठेको छैन। पार्टी बैठकमा एजेण्डा तय भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा कसैले गरेको छैन।'
'अहिले त हामीले सरकारले चुस्तदुरूस्त काम गरोस् भनेर विषय उठाएका छौं,' उनले भने,'पार्टीको कुनै पनि नेताले उहाँलाई हटाउन पर्छ भनेर गठबन्धन गरेको छैन। पार्टीका नेताले राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्यो भनेर हटाउने भनेर कसैले कल्पना गर्न पनि सक्दैन।'
'कतिपय व्यक्तिलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय पार्टीले संस्थागत रूपमा गर्छ। यो बैठकको अन्तिममा गर्ने कुरा हो,' उनले भने,'सबैले आफ्ना विचार राख्छन्। त्यसका आधारमा निर्णय हुन्छ। यो स्वभाविक नियम हो। यसमा कुनै बाह्य र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव देख्नु हुँदैन।'
'केही प्रमाण छन् भने पार्टीमा भन्नुपर्छ। होटलमा को-को बसेका थिए। त्यो सूचना प्रधानमन्त्रीलाई आएकै होला,' उनले भने,'आफूलाई हटाउन बाह्य शक्तिबाट भएको डिजाइनबारे प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।'
'प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो बोल्नु गलत हो। अहिले त भारतसँग कूटनीतिक रूपमा वार्ता गर्ने बेला हो। यस्ता अभिव्यक्तिले वातावरण बिग्रिन सक्छ,' उनले भने,'हामी कोही पनि बाह्य शक्तिबाट प्रभावित छैनौं। हामी देश जनता,लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समर्पित छौं।'
अर्का स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यमै रहेर आएको दाबी गरे।
'तथ्यबिना प्रधानमन्त्री बोल्न मिल्छ? अहिले जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउने षडयन्त्र भएको छ। विदेशी शक्ति उहाँलाई एक सेकेन्ड पनि पदमा बस्न दिने पक्षमा छैनन्,' उनले भने,'आफूलाई हटाउन खोजिए पनि राष्ट्रवादीहरूले हट्न नदिने भनेर उहाँले चुनौती दिनुभएको हो। अहिलेको राष्ट्रियता त्यति कमजोर छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको हो।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १६, २०७७, १४:२८:००
भूमि फिर्ता ल्याउन गम्भीर कूटनीतिक पहल थालौं, अयोध्यातिर ध्यान नमोडौं: कांग्रेस
ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता सकियो, भोलि फेरि भेट्ने
कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई देखियो कोरोना